Install unicode font to 3G — MYSTERY ZILLION
Install unicode font to 3G
iphone 3G မှာ unicode font ထည်လို့ရပါသလား
Cydia ကို သွားပါ။ Manage ‌အောက်က Source ကို သွားပါ။ Edit က‌နေ Add လုပ်လိုက်ပါ။ address တွင်
ကိုထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် Package များကို သူ reload လုပ်ပါမည်။ အကုန်ပြီးသွားလျှင် Sections ‌အောက်တွင် Zawgyi ဆိုတာ ‌ပေါ်လာမည်။ အထဲတွင်
ဆိုပြီး ၂ ခုရှိပါသည်။ Package Installation
Zawgyi Font သည် System Font များကို hack ပြီး‌တော့ မြန်မာစာ စာလုံးများ ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့‌ကြောင့် သွင်းပြီးပါက remove ပြန်လုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ remove ပြန်လုပ်ပါက itune မှ restore ပြန်လုပ်လိုက်ရပါမည်။ Zawgyi Font package သည် application များ အားလုံးနီးပါးတွင် မြန်မာစာ ‌ပေါ်‌စေရန် font များကို ပြုပြင်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။
Zawgyi Keyboard ကိုသွင်းရာတွင် iKeyEx , Zawgyi Font နှင့် အခြား Dependencies များကို အလိုအ‌လျောက်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
Please use Unicode only in MZ. Thanks for your answer. Edited!